LA KULANKAYGII KOOWAAD EE JAALLE SIYAAD | Hadalsame Media
Home Taariikh LA KULANKAYGII KOOWAAD EE JAALLE SIYAAD
(Hadalsame) 21 Okt 2019 – Annaga oo ah ciyaal dhigta Dugsiga Hoose ayaan galab isugu soo baxnay in aan kubbad cayaarno. Galbo fara badan oo aan banooni cayaarnay ayay ka mid ahayd. Laakiin waa Galab aan weli xusuusteyda ka go’in.
Qacda hore waxaan mooday Aabbahay. Laakiin aabbahay xilligan ma soo rawaxo. Nooca baabuurtuna waa ay ka duwan yihiin kuwa uu aabbahay ku yimaado ama lagu keeno, haddii aanu lug ku imaan. Badiyaa baabuur militeri oo Ruushku sameeyay ayuu ku imaan jiray aabbe. Waxaa baabuurtaas ka mid ahaa Jeeb uaz ah iyo kuwo waaweyn oo ay ka mid ahaayeen Gaz, Maz, Triaz iyo baabuur dheereeya oo ay Soomaalidu ula baxday daf iyo miriq.
Waxaa Usoo joogay: Yuusuf Garaad
Previous articleMa taqaannaa KHIYAANADA adduunka ugu wayn uguna khatarsan?!!
Next article”Dani idiinkuma jirto!” – Qoraa Kenyan ah oo Somalia usoo jeedisey talo wax ku ool ah!